सुझाव गर्न एक मानिस बनाउन चाहनुहुन्छ एक गम्भीर सम्बन्ध सहमत वा असहमत: प्रतिबद्धता सम्बन्ध सल्लाह गर्न कसरी छ, एक मानिस बनाउन प्रतिबद्ध छन् किन पुरुष को डर प्रतिबद्धता
छ तपाईं कहिल्यै ध्यान भुक्तानी गर्न सल्लाह मान्छे दिइरहेका छन् महिला बनाउन कसरी मा एक मान्छे प्रतिबद्ध गर्न एक गम्भीर सम्बन्ध? केही मेरो महिला मित्र अक्सर मा प्राप्त गरम चर्चा जो सामान्यतया वरिपरि मानिसहरू तिनीहरूले मिति, आफ्नो गर्लफ्रेंड्स, र पनि आफ्नो पूर्व गरेको छ । यो देखिन्छ कि रूपमा लामो रूपमा आफ्नो चर्चा समावेश छैन तिनीहरूलाई सीधा वा अप्रत्यक्ष, तिनीहरूले धेरै व्यावहारिक बारेमा सल्लाह दिने आफ्नो महिला मित्र, तर चाँडै रूपमा कुराकानी को विषय उत्तेजित गर्दछ तिर आफ्नै परिस्थिति संग मानिसहरू, तिनीहरूले असहाय भएका छ । त्यसैले किन यो यति सजिलो दिन डेटिङ र सम्बन्ध सल्लाह गर्दै छन् जब तपाईं एक गणनामा मा बाहिर देख मा, र त्यसैले कठिन छन् जब तपाईं एक निर्णय गर्न प्रयास विषयमा आफ्नो सम्बन्ध संग आफ्नो मानिस ।. त्यसैले, प्रस्तावित तरिका बनाउन को लागि एक मानिस प्रतिबद्ध गर्न एक गम्भीर सम्बन्ध र तिनीहरूलाई सूची यहाँ छ, आदेश । त्यसपछि म मेरो राय साझेदारी र तपाईं संग राज्य कि म सहमत वा असहमत, र तपाईं आमन्त्रित टिप्पणी गर्न प्रत्येक ती मध्ये एक अंक थप्न र अधिक को आफ्नो आफ्नै छ । तपाईं चाहनुहुन्छ भने, एक मानिस बनाउन प्रतिबद्ध छैन उसलाई संग सेक्स छ सम्म तपाईं थाह, तपाईं मा एक गम्भीर सम्बन्ध — असहमत । गर्न को लागि प्रतीक्षा गर्न विवाह भएको यौन घनिष्ठ संग एक मान्छे छ, तर यदि तपाईं सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि मानिस तपाईं संग सुतिरहेको छ आफ्नो प्रेमी, सम्म प्रतीक्षा, उहाँले हुन्छ आफ्नो प्रेमी र त्यसपछि मात्र, कि पछि तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. यो ग्यारेन्टी हुनेछ कि तपाईं संग सो एक मानिस तपाईं छन् जो मा एक गम्भीर सम्बन्ध संग हुनेछ र तपाईं मन को शान्ति दिन. यो काम छैन किनभने तपाईं गर्न खोजिरहेका छन् छ, एक मानिस बनाउन प्रतिबद्ध गर्न एक गम्भीर सम्बन्ध छ । तपाईं मात्र गरिरहेको यो आफैलाई लागि भनेर. यदि तपाईं तथापि गर्न चाहनुहुन्छ संभावना लिन र निद्रामा बिना उहाँलाई प्रतिबद्धता, तपाईं लागि तयार हुन गर्न कुराहरू जाने छैन आफ्नो बाटो । यदि तपाईं सुन्दर छन् कि संग, अगाडि जानुहोस् र उसलाई सुत्न छ जब तपाईं चाहनुहुन्छ. वास्तवमा को संग सेक्स भएको एक मान्छे बिना प्रतिबद्धता छैन, स्वचालित बनाउन उहाँलाई चलान अन्य दिशा मा. भने अरू सबै बाहिर काम गर्दछ खैर, उहाँले सक्छ प्रतिबद्ध गर्न एक गम्भीर सम्बन्ध संग तपाईं वास्तवमा पछि, वा उहाँले छैन सक्छ. तपाईं बस तयार छ । म कडा सल्लाह लागि आफ्नो सुरक्षा छ, तपाईं सम्म प्रतीक्षा उहाँले घोषणा. भइरहेको एउटा स्वतन्त्र महिला एक मानिस । यो केवल मतलब छ कि आफ्नो स्वतन्त्र देखि उहाँलाई चासो र आफ्नो जीवन । छैन एक हुन चाहन्छ लागि केवल जिम्मेवार बनाउने तपाईं आनन्दित, तर तपाईं पनि देखाउन आवश्यक एक मानिस तपाईं आनन्द भनेर भएको मा उहाँलाई आफ्नो जीवन । खेल प्राप्त गर्न कठिन छ, उपलब्ध छैन, र मात्र बनाउँछ एउटा उपलब्ध मानिस. उहाँले पछि एक सम्बन्ध छ तपाईं संग उहाँले मात्र पछि. एक पटक पीछा छ भन्दा, उहाँले चासो खो दि्छ. यो छ छैन किनभने तपाईं खेल रोक्न प्राप्त गर्न कठिन यो छ बस किनभने एक मानिस छ, जसले आकर्षित गर्न पाउनु कत्ति रोमाञ्चकारी को खेद्नु मा रुचि छैन एक गम्भीर सम्बन्ध सुरु गर्न. उहाँले छ केवल पछि नै गर्ने महिला थोकहरुलाई खेद्नु । यो मानिस छ, अपरिपक्व, र महिला गर्ने आवश्यकता महसुस गर्न प्राप्त गर्न कठिन खेल्न छ अपरिपक्व रूपमा राम्रो तरिकाले. पानी पाता यसको आफ्नै स्तर । खेल प्राप्त गर्न कठिन छ. तपाईं आकर्षित हुनेछ को प्रकारको मानिसहरू छन् जो पछि चुनौती छ । यदि तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ एक मानिस लागि देख छ जो एक गम्भीर सम्बन्ध छ, तपाईं संग इमानदार हुन र उहाँलाई छैन, खेल खेल्न । जब तपाईं चाहनुहुन्छ एक मान्छे संग इमानदार हुन, तपाईं उहाँलाई दिन इमानदारिता र भने उहाँले प्रकारको मा तपाईं थाह, उहाँले एक. हो, इमानदारिता डरावना छ, र मात्र एक साँच्चै विश्वस्त महिला ह्यान्डल गर्न सक्छन्, दबाव को राशि इमानदारिता आवश्यकता छ । असुरक्षा, अर्कोतर्फ, यो गुण अक्सर चिन्न मा आफूलाई पाउँछौं । कि ड्राइव महिलाहरु गर्न प्राप्त गर्न कठिन खेल्न छ । त्यसैले, यी सबै भन्दा साधारण कुरा हो मान्छे सल्लाह गर्दा कसैले गर्न खोजिरहेको छ, एक मानिस बनाउन प्रतिबद्ध गर्न एक गम्भीर सम्बन्ध छ । गर्छ केहि मनमा आएको छ । एक टिप्पणी छोड्नुहोस्, प्रश्न वा प्रतिक्रिया तल टिप्पणी खण्ड मा. मुस्लिम महिला खुसी छन् र रुचि यो खेल खेल्न संग धेरै हामी जस्तै प्रेस जब हामी गे, हामी चाहन्छौं, उहाँले मात्र सेक्स हुन सक्छ भने हामी विवाहित यो हाम्रो धर्म, र उहाँले मात्र एक हुनेछ, संग सेक्स गर्न आफ्नो बालिका । गादका गरे आफ्नै रोल भने हामी पालन कि रोल देखि हाम्रो पवित्र कुनै पनि गरिनेछ बस चरण द्वारा चरण पालन र तपाईं खुसी हुनेछन् कहिल्यै अघि जस्तै छ । धेरै धेरै धन्यवाद लागि यो ठूलो. म थियो धेरै रोचक विचार गर्दा यो पढेर जो म शायद बस मा राखे कार्य. धन्यवाद । म जान्न चाहन्छु बनाउन कसरी, मेरो मान्छे चाहनुहुन्छ एक गम्भीर सम्बन्ध संग मलाई । हामी सिर्फ डेटिङ तर म उसलाई मेरो प्रेमी छ । यस लेखमा धेरै उपयोगी थियो मलाई । धन्यवाद तपाईं यी प्रकारको पोस्ट सधैं छन् प्रेरक, र म पढ्न रुचि गुणवत्ता सामाग्री त्यसैले म खुसी छु पाउन धेरै राम्रो बिन्दु मा यहाँ पोस्ट लेखन, बस छ ठूलो, म सहमत के तपाईं यहाँ भने, विशेष गरी महिलाहरु बारेमा कसले प्राप्त गर्न कठिन खेल्न किनभने आफ्नै. म प्रयोग जस्तै हुन भनेर पनि र म को एक धेरै गुमाएका राम्रो मानिसहरू किनभने म खेल थियो पनि उपलब्ध. मेरो हालको प्रेमी र म एक पूर्ण विभिन्न सम्बन्ध छ । हामी इमानदार छन्, प्रत्येक अन्य संग र छैन, खेल खेल्न र हाम्रो सम्बन्ध छ बस अद्भुत छ । उहाँले मलाई भन्नुभयो सुरुदेखि त्यो लागि देख थियो एक गम्भीर सम्बन्ध, र उहाँले विवाह गर्न चाहन्छ र एक परिवार सुरु एकदिन. हामी गरिएको लागि सँगै एक वर्ष र उहाँले प्रस्तावित अझै, तर मलाई थाहा छ कि म बस प्रतीक्षा र हेर्न छ, र म. समय सही छ जब, उहाँले हुनेछ, तर म गर्न मा कुनै पनि दबाब राखे र उहाँलाई बनाउँछ के हो भनेर हाम्रो सम्बन्ध यति अद्भुत छ । हामी केही साझा अचम्मको कुरा र अनुभव, र हामीलाई प्रत्येक हाम्रो आफ्नै जीवन छ तर हामी धेरै नजिक छन् । केही बिन्दु मा म बारेमा चिन्तित थियो जहाँ यो लाग्नुभएको थियो र उहाँले थियो भने चाँडै, तर अब म सिकेका आराम गरौं र हाम्रो सम्बन्ध स्वाभाविक विकास गर्न धन्यवाद, आफ्नो लेख र पुस्तकहरू कि म मिल्यो । म फिर्ता आउँदै राख्न बढी सिक्न किनभने म भनेर पक्का गर्न चाहनुहुन्छ, म जारी, मेरो व्यक्तिगत वृद्धि माध्यम पढेर आफ्नो सामान । म खुसी छु यो जानकारी संग, तर म बढी जानकारी आवश्यक, त्यसैले कृपया अपडेट बढी सामान धन्यवाद तपाईं यी धेरै गर्न कसरी मा राम्रो सुझाव बनाउन एक केटा चाहनुहुन्छ संग एक सम्बन्ध छ तपाईं. भेट मानिस मेरो सपना अझै छ, तर म के गर्न के थाहा जब म उहाँलाई भेट्न.
हामी बाहिर गए को तीन मिति. म चाहनुहुन्छ के थाह म के गर्नुपर्छ बनाउन, उहाँलाई चाहनुहुन्छ एक सम्बन्ध संग मलाई । म धेरै सिकेका देखि आफ्नो सुझाव, र तपाईं सही हो, ती सबै कुराहरू थिए मलाई भन्नुभयो जब म मेरो साथी सोधे बारेमा कसरी म बनाउन सक्छ, उहाँलाई चाहनुहुन्छ एक गम्भीर सम्बन्ध छ । इनपुट र यो साँच्चै मलाई मदत हेर्न कुराहरू स्पष्ट छ ।. मेरो प्रेमी गर्न प्रतिबद्ध छ मलाई र टी उहाँलाई सुत्न पहिलो रात हामी भेटे । म पर्खेको धेरै महिना लागि पहिले हामी भए घनिष्ठ छ । पहिले म प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ संग घनिष्ठ मान्छे धेरै चाँडै र कुनै पनि ती सम्बन्ध लामो छ । सुझाव मा, एक मानिस बनाउन कसरी गर्न प्रतिबद्ध मलाई ।. म राख्न हुनेछ आफ्नो साइट गर्न आउँदै छ । यी सुझाव को लागि धेरै उपयोगी छन्, मलाई म बस शुरू हेर्न एक नयाँ मान्छे र बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्का उहाँले चाहनुहुन्छ संग एक सम्बन्ध मलाई र छैन बस केहि आकस्मिक । म तलाकशुदा गरिएको लागि वर्ष र अब म हुँ बस सुरूवात मिति फेरि । म राखे प्रोफाइल मा एक लोकप्रिय डेटिङ साइट र भेट धेरै राम्रो मानिसहरू, तर यो एक साँच्चै विशेष छ मलाई र माथि पेंच.
ठूलो लेख । म पढाइ राख्न
नमस्ते, म बस गर्न मिल्यो यो मानिस थाहा छ । उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले देख लागि गम्भीर सम्बन्ध र उहाँले चाहनुहुन्छ, एक परिवार र एक बच्चा, म उहाँलाई सोधे म कहाँ खडा, र उहाँले भन्नुभयो म छु आफ्नो प्रेमिका, किनकी हामी शायद प्रत्येक अन्य देख्न, र म फेला कि म धेरै शंका
← च्याट वेबसाइटहरु बिना दर्ता
मेक्सिकन मुठभेडों: मात्र कुलीन खेल →